သက်တန့်အရောင်များအစဉ်လိုက် - ၎င်းတို့သည်မည်သည့်နေရာနှင့်မည်သို့ဖွဲ့စည်းသည် formed | ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
မော်နီကာဆန် | | မိုးလေ ၀ သဖြစ်ရပ်များ
နံနက်ယံ၌ထ။ ကြည့်ရှုခြင်းမှတပါးအဆင်းလှသောအရာမရှိ သက်တံအမှန်တရားလား ဤဖြစ်စဉ်သည်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် Venus နှင့်ဤကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်သာတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းခဲ့သလဲ ဘယ်ဟာလဲ သက်တံအရောင်များ သူတို့သည်အဘယ်သို့အလို့ငှာပေါ်လာသလဲ? ဒီကနေ ပြီးတော့နောက်ထပ်အများကြီးပဲ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့လူသားထုကိုဖမ်းဆီးပြီးစွဲမက်နေဆဲဖြစ်သောမိုးလေ ၀ သဖြစ်စဉ်တစ်ခုအကြောင်းကိုဤအထူးတွင်ဤနေရာတွင်ပြောပါမည်။
1 လူ့မျက်စိ, အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ရပ်မြင်နိုင်စွမ်း
မည်သည့်အရာ၊ မည်ကဲ့သို့ဖွဲ့စည်းသည်၊ သက်တံ့ရောင်၏အရောင်များကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်သည်ပထမ ဦး ဆုံးသင့်ကိုအနည်းငယ်မပြောဘဲဆောင်းပါးမစချင်ပါ။ ငါတို့မျက်စိမြင်သည်အတိုင်း၊။ ဤနည်းအားဖြင့်၎င်းကိုသင်နားလည်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်။ နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံတွေ့ဆုံသောအခါသင်သည် ပို၍ ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။
အဲဒါကိုယုံချင်မှယုံမယ်၊ လူ့မျက်စိဟာသဘာဝအကောင်းဆုံးအရာတွေထဲကတစ်ခုပါ။ ဟုတ်တယ်၊ မင်းမျက်ကပ်မှန်တွေဝတ်ဖို့လိုရင်တောင်မှ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိသည်အလင်းကိုအလွန်အထိခိုက်မခံပါ။ (လမ်းဖြင့်အဖြူ၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်အနီရောင်၊ အစိမ်းနှင့်အပြာအရောင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်) သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး သည်အရောင်တစ်မျိုးဖြစ်ပုံရအခြားတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအရာဝတ္ထုကိုထွန်းလင်းစေတဲ့အလင်းရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုစုပ်ယူပြီးတခြားသေးငယ်တဲ့အပိုင်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်လို့ပဲ; တစ်နည်းပြောရရင်၊ အဖြူရောင်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတွေ့ပြီ၊ ငါတို့တကယ်မြင်တာကရောစပ်ထားတဲ့ရောင်စဉ်တန်း၏အခြေခံအရောင်များဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၎င်းသည်အနက်ရောင်ဖြစ်ပါက၎င်းသည်မြင်နိုင်သောရောင်စဉ်၏လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓါတ်ရောင်ခြည်အားလုံးကိုစုပ်ယူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထိုအခါမြင်နိုင်ရောင်စဉ်ကဘာလဲ? ဒါထက်မကပါ လူ့မျက်စိသည်သိမြင်နိုင်စွမ်းရှိသည့်လျှပ်စစ်သံလိုက်ရောင်စဉ်။ ဒီဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုမြင်နိုင်တဲ့အလင်းလို့လူသိများကြပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်သို့မဟုတ်ခွဲခြားသိမြင်နိုင်သည်။ ပုံမှန်ကျန်းမာသောမျက်လုံးတစ်လုံးသည်လှိုင်းအလျား ၃၉၀ မှ ၇၅၀ မှ nm ကိုတုန့်ပြန်နိုင်လိမ့်မည်။
ဤလှပသောဖြစ်စဉ်သည်နေ၏ရောင်ခြည်များသည်လေထုထဲတွင်ဆိုင်းငံ့ထားသောရေသေးငယ်သည့်အမှုန်များကိုဖြတ်သန်းသွားသောအခါဖြစ်ပေါ်သည်။ထို့ကြောင့်ကောင်းကင်၌အရောင်များကို arc ဖန်တီးပေးသည်။ ရေတစ်စက်သည်ရေတစ်စက်ဖြင့်ကြားဖြတ်ခံရသောအခါ၎င်းသည်မြင်နိုင်သောရောင်စဉ်၏အရောင်များကိုဖြိုခွဲလိုက်ပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်၎င်းသည်ယင်းကိုလမ်းလွဲစေသည်; တစ်နည်းအားဖြင့်နေရောင်ခြည်သည်ကျဆင်းသွားသည့်အခါနှင့်အရွက်ပေါက်သောအခါတွင်လည်းအလင်းယိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ရောင်ခြည်ကိုထပ်တူညီတဲ့ဆိုက်ရောက်လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်သန်း။ ထို့အပြင်၎င်းသည်တစ်စက်ထဲသို့ ၀ င်လာသောအခါအလင်း၏အလင်းပြန်ခြင်းသည်၎င်းတွင်ရောင်ပြန်ဟပ်ပြီး၎င်းသည်အရွက်ပေါက်သောအခါပြန်လည်ပြတ်သွားသည်။
အ သက်တံအရောင်များ ခုနစျပါးရှိပါတယ်, နှင့်သက်တံ့၏ပထမအရောင်အနီရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ TO သို့သူတို့ကဒီအမိန့်ထဲမှာပေါ်လာ:
အစိမ်းရောင်။ အစိမ်းရောင်ဟုခေါ်တွင်ဖို့လမ်းပေးသည် အအေးအရောင်များ.
သက်တံ့ ၎င်းတို့သည်မိုးရာသီ (များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်အနည်းငယ်မိုးအုံ့လေ့ရှိသည်) သို့မဟုတ်လေထုစိုထိုင်းဆအလွန်မြင့်မားသည့်အချိန်များတွင်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးတွင်ကြယ်၏ကြယ်ပွင့်ကိုကောင်းကင်တွင်မြင်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ငါတို့နောက်ကျောတွင်အမြဲရှိလိမ့်မည်။
နှစ်ကြိမ်သက်တံများသည်ပုံမှန်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့ကိုအခါအားလျော်စွာတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်နေ၏ရောင်ခြည်မှဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်တစ်စက်၏အောက်ပိုင်းတစ်ဝက်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာပြီးလှေနှစ်စင်းပေးပြီးလျှင်ပြန်လာကြသည်။ ထိုသို့ပြုရာတွင်ရောင်ခြည်များသည်ပြန်လည်ကျဆင်း။ ပြန်လည်ကျဆင်းသွားပြီးသက်တန့်အရောင် ၇ ရောင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသော်လည်းပြောင်းပြန်လှန်သည်။ ဒုတိယအိုးသည်အရင်ကထက်အားနည်းနေသော်လည်းအတွင်းအိုးနှစ်ခုအစားသုံးခုရှိပါကတတိယထက်ကောင်းသည်။
ဤဖြစ်စဉ်သည်နှစ်သန်းပေါင်းများစွာနှင့်သန်းပေါင်းများစွာကြာအောင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်၊ သို့သော်အဖြစ်မှန်မှာထိုအရာဖြစ်သည် လွန်ခဲ့သောသုံးရာစုနှစ်အထိမည်သူမျှသိပ္ပံနည်းကျရှင်းပြရန်ကြိုးစားခဲ့ခြင်းမရှိချေ။ ထိုအချိန်အထိ (ဓမ္မဟောင်းကျမ်းအရ) စကြာ ၀ Flာရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်ဘုရားသခင်သည်လူသားတို့အားဘုရားသခင်ပေးသောလက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်စဉ်းစားခဲ့ကြပြီး၎င်းသည်ဂယ်လ်ဂမ်ရှ်ကိုရေလွှမ်းမိုးခြင်းအားသတိပေးသည့်လည်ဆွဲများအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည် ("ဂိလဂေမက်မြို့၏ Epic" အရ) ဂရိလူမျိုးများသည်သူမသည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးအကြားအိုင်ရီးစ်နတ်သမီးနတ်ဘုရားမဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီက ၁၆၁၁ ခုနှစ်တွင် Antoinius de Demini သည်သူ၏သီအိုရီကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းကိုနောက်ပိုင်းတွင်René Descartes မှပြုပြင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်သက်တံဖွဲ့စည်းခြင်းရဲ့တရားဝင်သီအိုရီကိုသူတို့ကဖော်ထုတ်ပြတာမဟုတ်ဘူး။ Isaac ဇာက်သည်နယူတန်.
သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး နေမှဖြူရောင်အလင်း၊ အနီရောင်၊ လိမ္မော်၊ အဝါ၊ အစိမ်း၊ အပြာ၊။ သက်တံ၏အရောင်များ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေ ၀ သဖြစ်ရပ်များ » သက်တံအရောင်များ
Beatriz Bermudez ဟုသူကပြောသည်
ခရမ်းရောင်၊ အပြာသို့မဟုတ်လက်စွပ်ကဲ့သို့သောအံ့သြဖွယ်အရောင်များကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည့်လှပသောသက်တန့်ထက် ပို၍ သိရန်မည်မျှကောင်းလိုက်သနည်း။
Beatriz Bermudez သို့ပြန်သွားပါ
Yaqob Mizrahim Zarza ။ ဟုသူကပြောသည်
ပြီးတော့ငါ hermeneutics ကိုလေ့လာတယ်၊ အရောင်တွေဟာအံ့သြစရာပဲ၊ နေရဲ့သဘာဝဖြစ်စဉ်နဲ့မိုးရေစက်တွေနဲ့သိပ္ပံနည်းကျရှင်းပြချက်တွေပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Yaqob Mizrahim Zarza အားပြန်ပြောပါ။